[05 / 04 / 2020] Nampidirina tamin'ny Fampitandremana 18-20 Taona ny fampidirana	Ankara 06
[05 / 04 / 2020] Rahoviana no hiparitaka amin'ny hopitaly ny fitaovam-pisefoana eo an-toerana?	Ankara 06
[04 / 04 / 2020] Fomba fanalana ny fiara / fameperana amin'ny tanàna	Ankara 06
[04 / 04 / 2020] Fanambarana manan-danja nataon'ny Ministra Selçuk momba ny fihenan'ny fitsaboana amin'ny fitsaboana	Ankara 06
[04 / 04 / 2020] Rahoviana no hanomboka ny fandoavana ny fiantohana amin'ny asa sy ny fiantohana?	Ankara 06
Nampidirina tamin'ny Fampitandremana 18-20 Taona ny fampidirana
Nifarana tao amin'ny Sivas Junction
Fanohanana masika ho an'ny olompirenena mampiasa ny fitateram-bahoaka any Manisa
Afaka mofomamy hafa ho an'ny fitsaboana fitsaboana Coranavirus ve ny mofomamy tsy mety maty?
Miditra any Torkia Coronavirus
Ny varotra miaraka amin'ny fitsapana PCR dia miverina amin'ny fivezivezena mahazatra
Epidemika sy ny maha-zava-dehibe ny lalamby!
Ny masaka nozaraina tamin'ny olom-pirenena mampiasa fiara fitateram-bahoaka any Gaziantep
Ny otrik'aretina mitondra olona dia voapoizina any Kocaeli
Miaramila sy mpiambina ho an'ny mpamily fiara ao Izmir
Tranga iray hafa hanoherana an'i Misra Öz Sel, izay namoy ny zanany lahy tamin'ny lozam-pifamoivoizana Çorlu